BWA012 - 10 Isiteshi Sokumisa Amachweba - Uhlelo Lokulawulwa Kobufakazi | Izixazululo ze-OMG
I-BWA012 - 10 Isiteshi Sokumisa Amachweba - Uhlelo Lokulawulwa Kobufakazi
ukubukeka: Umzimba womshini wamukela ubuchwepheshe bensimbi yensimbi eyodwa nobuso, kanye nokubekeka odongeni
Isikhombisi: Amakhamera omzimba we-10pcs wamaphoyisa angalayishwa ngasikhathi sinye, isikhombimsebenzisi ngasinye ngokukhanya kokuxhuma isikhombisi, okukodwa okukodwa kwe-1.2A
Ukusebenza: Uhlelo lobufakazi alunaso isitoreji, futhi isoftware yokuphatha ifakwe kwi-PC exhunyiwe, inikwa amandla yi-adaptha.
Ifakwe ikhebula ledatha elixhumeke nge-PC, iCD yokufaka isoftware, ukufakwa kudinga ukubhaliswa, isoftware eyodwa ye-CD ukusetshenziswa kwe-PC eyodwa.
Usayizi: 400 * 300 * 100
★ Kudivayisi blind / ★ Ukungenisa idatha
Ukuqopha kokugcinwa komthetho kungasetshenziswa ebudlelwaneni bomuntu ngamunye nobuso noma nobuningi nephoyisa, futhi kungasetshenziswa ukubopha noma ukuqaqa umthetho
rekhoda rekhoda kumsebenzisi.
Idivayisi eboshwe inenombolo ehlukile engabonakala futhi ivikelwe.
Ngemuva kokuthi irekhoda yokuphoqelelwa komthetho ixhunywe endaweni yokusebenza yokuphathwa kokuphepha kwedatha, uhlelo luzongenisa idatha ngokuzenzakalela bese luthulula i-
Imininingwane engenisiwe ifakwe kungobo yomlando ngokuzenzakalela futhi inikezwe igama lomsebenzisi elibophayo.
Isimo segumbi ngalinye lokungenisa singakhonjiswa esikrinini sokubonisa.
Indawo yokusebenza yokuphathwa kokuphepha kwedatha ibona ngokuzenzakalela indawo yegumbi, futhi isikhundla senombolo esikrinini sihambisana nendawo yokuhlala, futhi imininingwane yokubonisa ifaka phakathi: imininingwane yemishini yokuqopha umthetho, igama lomsebenzisi elibophayo, isimo sokungenisa, inqubekela phambili yokungenisa, njll.
I-Breakpoint Ngokuqhubekayo: Ukuqhubeka kwe-breakpoint kuyasekelwa, futhi ukunqanyulwa ngengozi kwerekhoda lokugcinwa komthetho ngesikhathi senqubo yokungenisa akubuthinti ubuqotho nokuhlukile kwedatha engenisiwe.
Idatha ayinalutho: Ngemuva kokuqoqwa kwedatha, ividiyo nevidiyo yomsindo ngaphakathi kwerekhodi lokuqinisekisa ukusebenza komthetho kuzocaca ngokuzenzakalelayo.
Ukuqamba okuzenzakalelayo kokuqamba: Ngemuva kokuqedwa kokuqoqwa kwedatha, kuhlukaniswa ngokuzenzekelayo bese kugcinwa ngokwesikhathi nosuku, inombolo yensimbi yomthetho kanye namaphoyisa
Ukushaja okuzenzakalelayo: Ukuqoshwa komthetho kufakwa esiteshini futhi kukhokhiswa ngokuzenzakalelayo.
Samandla isikhathi ngokuzenzakalela: Sekela ukulinganisa okuzenzakalelayo kwerekhoda yokuphoqelela umthetho ngokusebenzisa isiteshi sokutholwa, nokuvumelanisa neseva yesikhathi.
Ukungenisa ngokuzenzakalela kwedatha:
Ukuqoqwa kwedatha okuzenzakalelayo, ukusekela ukulayisha inkomba yefayela, ifayela loqobo levidiyo nefayela lokusakaza elicindezelwe kwiseva ngokusebenzisa inethiwekhi.
Sekela isu lokulawula ukulayishwa: kufaka phakathi isikhathi sokulayisha nokulawulwa komkhawulokudonsa.
Isikhundla Sokusebenza: Sekela isibonisi ukufinyelela inombolo yomshini wokuqopha ukusetshenziswa komthetho, iyunithi yomsebenzisi nesimo samanje, futhi kufakwe nenombolo yesikhundla eyodwa kuya kokunye ukuxhumana, ukuvimbela ukuthatha okungalungile.
Ukusakazwa Ngezwi: Iyakwazi ukuxhasa ukuqoqwa kwezwi kokuqalisa nokuqoqa okuphelele
Ukuphathwa kokususwa kwedatha: Ivumela umsebenzisi ukuthi asuse kuphela ingxenye yamafayela aqoqiwe kwirekhoda, okwenza kube lula ngomsebenzisi ukubuka ividiyo eseduzane nesiqopha, ngisho
uma ividiyo iqoqwe.
I-BWA012 - 10 Isiteshi Sokumisa Amachweba - Uhlelo Lokulawulwa Kobufakazi igcine ukuguqulwa: Kwangathi i-20th, i-2020 by admin
Ukubuka okuphelele kwe-4513 Ukubuka kwe-2 Namuhla